Izintshisekelo ezi-3 mayelana namalambu aseNyakatho | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Zimbalwa izinto ezibabazekayo futhi ezimangazayo njengokubuka i-aurora borealis esibhakabhakeni futhi ngukuthi labo bantu ababa nenhlanhla ngokwanele yokucabanga eyodwa, Bakhuluma ngokuhlangenwe nakho okuyingqayizivele futhi okungenakulibaleka okungenakuqhathaniswa nanoma yini ebonwe kuze kube manje.
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngamalambu aseNyakatho, naka kakhulu ngoba lapho-ke ngizokutshela izifiso ezithile zalesi simo semvelo ukuthi kufanele ubone okungenani kanye empilweni yakho.
1 Kukhona amalambu asenyakatho kwamanye amaplanethi
2 Babukeka kangcono ngamakhamera ezithombe
3 Bangabonakala emkhathini
Kukhona amalambu asenyakatho kwamanye amaplanethi
Izibani zaseNyakatho azigcini ngeplanethi yoMhlaba ngoba ama-space probe ahlukile akhombisile izithombe zama-aurora kumaplanethi we-Jupiter neSaturn. Ama-aurora kula maplanethi amangalisa kakhulu futhi makhulu kuneMhlaba ngoba amandla kazibuthe akula maplanethi akhulu kakhulu futhi anamandla kakhulu kunoMhlaba.
Babukeka kangcono ngamakhamera ezithombe
Iso lomuntu alikwazi ukuthola ubuhle beziLambu zaseNyakatho, Kodwa-ke, amakhamera avumela ukuthatha izithombe ukuze abuke ubuhle bemvelo bama-aurora. Ukuhlelwa kokuvezwa kwamakhamera okude kuhambisana nesibhakabhaka esicacile futhi esimnyama kusiza ukubona amalambu asenyakatho kubo bonke ubukhazikhazi bawo.
Kuyafakazelwa ukuthi amalambu asenyakatho angabonakala ngokuphelele emkhathini. Osomkhathi neziphuphutheki bangathatha izithombe emzileni we-Earth ezikhombisa ubukhulu bamalambu asenyakatho. Uma zenzeka endaweni emnyama yoMhlaba, izithombe ngokuvamile ziyamangalisa futhi ziyamangalisa.
Lezi izifiso ezi-3 okufanele uzicabangele ngamalambu aseNyakatho, umbukwane weqiniso ongabonwa ngabantu abathile abanenhlanhla emhlabeni.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Izintshisekelo ezi-3 mayelana namalambu aseNyakatho